EyoMsintsi 6, 2018 admin
Coinbase uphonononga Bitcoin ETF ngoncedo oluvela Blackrock
Coinbase ujonge ukudala imveliso Exchange-wasebenza ebotshelelwe crypto, ngokutsho kubantu eziqhelekileyo lo mbandela, njengendlela ukuvumela abatyali-ngemiyinge emincinci ukuzuza ukufikelela kwiimarike eguquguqukayo. Kwiiveki nje le nkampani iye yabamba incoko kunye namalungu eqela yokusebenza blockchain BlackRock ukuba angene nemachule nkampani kunye awasungule iimveliso exchange-wasebenza.
Coinbase Sibhengeze i fund index, 6 kwiinyanga ezidlule, of cryptocurrencies ejoliswe kubatyali-accreditation. i ETF, kunjalo, ajolisa ekukhawulelaneni abatyali ezininzi eziqhelekileyo. Ukuba Coinbase babeza ukuphuhlisa ETF crypto, kwalo nelinye iqela ezinye iinkampani nazo ujonge ukuba ethule ezabo, kubandakanya nembangi Gemini, Bitwise Asset Management, no VanEck.
isixeko chinese usebenzisa blockchain ukulandelela iintshukumo igweba on parole
Zazinza ngengqawule kwisixeko kumazantsi Chinese of Zhongshan ngoku bazifumane kulandelelwa phezu kwenethiwekhi blockchain. Isebe ubulungisa Zhongshan ithi iye yasungula inkqubo blockchain-esekelwe ukuba esweni iintshukumo ex-amabanjwa ukuphucula umgangatho ebizwa ngokuba “ulungiso ekuhlaleni.”
Parolees kufuneka ukuba ungene uze ugqibezele imisebenzi yemihla ngemihla ngaloo ndlela kubonelelwa data phezulu-ukuya-umhla kwi iintshukumo ilahla ngamnye, ngoko abasebenzi ulungiso yoluntu kunye nee-arhente zokunyanzeliswa komthetho ezifanelekileyo mxhamli ukufikelela kwinethiwekhi bayakwazi ukwazi umkhondo a ilahla ngelo naliphi na ixesha, yaye ngaloo ndlela singathatha amanyathelo ayimfuneko xa ubani laphula evela routine efunekayo. Isebe ubulungisa ibango ukuba ubuchwepheshe uyakwazi ukunciphisa umthwalo eqela labasebenzi ukuba ngokwemveli kufuneka balandele emzimbeni parolees xa ukuqinisekisa ukuba uthobela imithetho nangokwenza inkonzo zoluntu.
Times High yamkela Bitcoin for Ipo yayo
Le ncwadi ntsango High Times ukwamkela cryptocurrency okuqhubekayo nomnikelo walo ekuqaleni yoluntu (Ipo). ummeli High Times Jon Cappetta waqinisekisa ukuba nkampani ukwamkela Bitcoin njenge ukhetho intlawulo. Cappetta bathi yokufayilisha elawulayo (ebonisa ngenye) wenziwa “ukuvuyisa i umzuzwana.”
Kubangel 'umdla ukwazi ukuba iFund Melika osetyenziselwa ukuguqula nangoko Crypto ibe zeedola US. Times high’ Ipo ngokwayo into ihamba kakuhle, uthe cap, kwaye inkampani bajonge udweliso ngqo ngenxa. “WokuLawula A [izimali] uza ukuvala ngomhla we-12 kule nyanga, kwaye ke ukusuka apho siza kuqala inkqubo obonisa” uthe.
Ingxelo Daily Market Kraken for 05.09.2018
$172M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Previous:Blockchain News 05.09.2018